Mpanamboatra sy mpamatsy fantsom-bary azo ovaina - China Factory Metallic Conduit Factory
JSG-karazana fampivoarana mihombo
Ny fantsom-pifandraisana JSG dia tariby vy mifangaro vy izay misy fanoherana tsara hikatona amin'ny vatan'ny rindrin'ny JS fantsona, ary mahatohitra tsara ny hafanana, ampiasaina amin'ny tontolon'ny hafanana avo.
Ny firafitry ny fantsom-by metaly PVC / PU dia fantsom-by vita amin'ny metaly vy, fantsom-baravarankely vita amin'ny fantsom-baravarankely ary fehikibo vy mifono vy, firafitra mifamatotra, sheathing TPU. Ny afo-retardant dia V0 (UL94). Ny mari-pahaizana momba ny fiarovana dia IP68.
Famaritana fohy Ny mari-pahaizana momba ny fiarovana dia IP40. Ny fananan'ny lakandrano metaly dia miovaova, mihinjitra, manohitra ny famatrarana avy eo. Ny firafitra dia ratra amin'ny fehin-kibo vita amin'ny metaly zinc, profil mifatotra ary fantsom-by vita amin'ny vy nandratra.
Ny fantsom-by vy tsy misy vy dia ampahany lehibe amin'ny indostria maoderina. Ny fantsom-by vy tsy misy vy dia ampiasaina ho fantsom-piarovan-tariby sy tariby ho an'ny tariby, tariby, fambara fitaovana mandeha ho azy ary hose fandroana sivily, miaraka amin'ny antsipiriany avy amin'ny 3mm ka hatramin'ny 150mm. Ny fantsom-by vy tsy misy fangarony kely savaivony (savaivony anatiny 3mm-25mm) no tena ampiasaina amin'ny fiarovana ny fizaran-tsiran'ny mpanapaka optika mazava sy ny fiarovana ny fizaran-tseran'ny indostrialy.
Làlan-by amin'ny alàlan'ny PVC
Ny fantsom-piarovana ampiasaina amin'ny fanaovana tariby sy tariby amina sehatr'asa isan-karazany dia fantsom-by vita amin'ny vy miendrika afo miaro amin'ny afo, izay tsy afaka miaro tariby sy tariby fotsiny, fa misoroka ihany koa ny famoahana bara elektrika; azon'izy ireo atao koa ny mandamina ny tsipika sy mahazo vokatra tsara tarehy.